Ụlọ ọrụ CNC Wood Router Factory - Ndị na-emepụta ihe ntanetị nke China CNC, ndị na-ebunye ya
Ụlọ ọrụ na-enye Pneumatic 4X8 Akụrụngwa na-arụ ọrụ osisi Atc Wood CNC Router
# A ga-anwale igwe ọ bụla maka awa 10 tupu ebuga ya, ha niile tozuru oke.
# A na-enyocha igwe ọ bụla ihe dị ka usoro 10 tupu ebuga ya, nke nwere ike idobe igwe kwụ ọtọ, ikike siri ike, ogologo oge na-ebuli elu na nkwụsi ike zuru oke.
China CNC rụpụtara 1530 igwe ịkpụ osisi maka arịa ụlọ osisi
Nke a bụ APEX1530 CNC rawụta, Vacuum na T-slot table, DSP A11 akara usoro, nzọụkwụ moto na ọkwọ ụgbọala, 4.5kw ikuku jụrụ spindle wdg.
Ọzọkwa nwere APEX1325, APEX2030, APEX2040 wdg Machine nlereanya nwere ike ahaziri.
4 Axis Atc CNC Router Ihe osise osisi na ihe na-agbanwe ngwa ngwa
* Akụrụngwa: ọnụ ụzọ osisi, kọbọd, efere, arịa ụlọ ọrụ na osisi, tebụl, oche, ọnụ ụzọ na windo.
* Ngwaahịa osisi: igbe olu, igbe egwuregwu, tebụl kọmputa, tebụl igwe akwa, ngwa.
* Nhazi efere: akụkụ mkpuchi, akụrụngwa kemịkalụ plastik, PCB, ahụ dị n'ime ụgbọ ala, egwu bọọlụ, steepụ, bọọdụ mgbochi Bate, resin epoxy, ABS, PP, PE na ogige ndị ọzọ agwakọta carbon.
* Industrylọ ọrụ na-achọ mma: acrylic, PVC, MDF, nkume wuru ewu, iko organic, rọba na ọla dị nro dị ka ọla kọpa, ihe osise aluminom na usoro igwe nri.
Nkwalite ọnụ ahịa CNC rawụta akpaaka na-egbutu igwe maka ihe eji arụ ụlọ
Linear ATC CNC Router dị ọnụ ahịa nwere mkpịsị mkpịsị ihe na-agbanwe ngwa ngwa
Ọrịre na-ekpo ọkụ 1325 Akụrụngwa kichin n'ọnụ ụzọ ịsa osisi na-arụ ọrụ CNC Router Machine